Fiiq Qaabaynta soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Warshadda - Xiangfu
Guriga > Alaabada > Fiiq Qaabaynta
Nooca Fiiq (Vacuum Formin) waxaa badanaa loo yaqaannaa finjiraha caagga ah. Waa tikniyoolajiyad balaastig ah. Mabda 'ugu weyn ayaa ah kuleylka iyo jilicsanaanta xaashiyaha balaastigga ah. Waa vacuum-adsorbed dusha sare ee caaryada oo la qaboojiyey si ay u sameeyaan. Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa baakadaha caagga ah, iftiinka iyo xayeysiinta. , qurxinta iyo warshadaha kale.
Waxyaabahayaga, Vacuum Formin, ayaa loo qaybiyaa shan qaybood: Suxuunta Hawada, Sanduuqa Gawaarida gawaarida, Waxyaabaha sameynta vacuumka caadiga ah, Taxanaha Bandhiga Costom, Qeybaha Gawaarida Gawaarida.
Shenzhen Xiangfu Precision Industry Co., Ltd waa shirkad soo saare Vacuum Formin xirfad u leh Shiinaha, dhammaan noocyada wax soo saarka iyo iibka, qeexitaanno kala duwan, tayo sare iyo qiimo hooseeya, moodallo dhameystiran, ku-talogal ah, iibinta tooska warshad!
Lagu Sameeyay Fiiq Qaabaynta gudaha Chgudahaa Xiangfu warshad - soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha. Soo dhawow ku our warshad iibso sare tayo leh iyo hooseeya qiimo Fiiq Qaabaynta. Anaga doonaa siin adiga leh xigasho iyo bilaash ah tusaalaha.